ကျွန်တော်တို့ USB Drive မှ Autorun.inf virus အကိုက်ခံတဲ့ ဘယ်လို ရှင်းမလဲ ဆိုတာကို ပြီးကတဲ့ နေ့က မိတ်ဆွေတစ်ယောက် မေးတာကို ဖြေပေးခဲ့တာကို ဒီမှာ ပြန်တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ကျွန်တော်က ဒီနည်းကို သင်ပြပေးခဲ့တာက ကျွန်တော် အကို ကိုရုပ်ဆိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်းကို ကျွန်တော် မိတ်ဆွေက မေးတော့ အတော်ဖြစ်သွားတာ ။ ဒါနဲ့ ဆိုဒ်မှာ တင်ပေးဖို့ပါ အကြံရလိုက်တယ်။ သူများ တင်ပေးပြီးသာဆိုလာတော့ ကျွန်တော် မသိဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် သူငယ်ချင်းတွေ သတ်တဲ့ နည်းလေးကို ဆိုဒ်မှာ မရေးတင်ဘူးသေးလို့ တင်ပြပေးလိုက်တာ။ ပြောနေကျတယ်။ USB , CD, DVD တွေကနေ Autorun.inf virus ကိုက်ခဲ့လျင် အောက်ပါအတိုင်း သက်နိုင်ပါတယ်။ ဒါမျိုးတွေကို အတော်များများရေးပြီးကျပြီဆိုတာ သိတယ်။ သို့သော် ကျွန်တော် ဆိုဒ်မှာ လာလည်ကျတဲ့ သူတွေမှာ အခြေခံသမားတွေလည်ပါတယ်။ အတန်အသင့်သမားတွေလဲ ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်သမားတွေလည် ရောက်လာတက်တာရှိတယ်။ ဒါကြောင့် တင်လိုက်တယ်။ ဒါမျိုးမလုပ်ချင်လည် Software ပါ တင်ပေးလိုက်တယ်။
1. Safe mode ကို သွားဖို့ အတွက် မိမိ ကွန်ပျူတာကို Restart ချလိုက်ပါ။ Windows တက်နေတုန်းမှာ F8 key ကို နိုပ့်ပေးထားပါ ။ အောက်က ပုံကိုကြည့်ပါ။
2. Start >> Run >> cmd လို့ ရိုက်ပြီ command prompt ကို ဖွင့်လိုက်ပါ။
Cd X: ( x = မိမိ အသုံးပြုမည့် Drive Name ကို ရိုက်ပါ။ ) ရိုက်ပြီ Enter ခေါက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ( သို့မဟုတ်)
Cd\_ ဆိုပြီ root directory ကို သွားရမှာဖြစ်ပါတယ်။
3. ပြီတာနဲ့ autorun file ရဲ့ attributes ကို ပြောင်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာကြည့်ပါ။ cmd မှာ အောက်က attribute ကို အရင်ရိုက်ပါ။
Attrib –h –r –s autorun.inf
-h = remove Hidden property
-r= remove Read only property
-s=remove System files property
အဲ့ဒီလို ရိုက်ပြီးတာနဲ့ files ကို Delete ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ cmd မှာအောက်က code ကို ထပ်ရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
Del –h –r –s autorun.inf
ပြီးတာနဲ့ မိမိ computer ကို Restart ချလိုက်တာနဲ့ မိမိ လုပ်ခဲ့တဲ့ Drive ကို open နိုင်ပါပြီ။
Software သမားတွေအတွက် ကြိုတင်ကာကွယ်ပေးမည့် Panda USB Vaccine users လေးနဲ့ တင်ပြပေးလိုက်တယ်။ Software အကြောင်းအကြမ်းဖျင်းပြောပြမယ်။ သူ့မှာ အပိုင်းနှစ်ပိုင်း ပါဝင်တယ်။
သူကတော့ ဘယ်လို CD/DVD Drive နဲ့ USB Drive တွေရဲ့ autorun ကိုမဆို Disable လုပ်ပေးတဲ့နေရာမှာ အသုံးပြုပေးတဲ့ Tool ဖြစ်တယ်။။ တကယ်အသုံးတဲ့ပါတယ်။
သူ ကတော့ malware တွေရဲ့ auto ဖြန့်ဝေမှု့တွေကို ကာကွယ်ဖို့အတွက် USB Drive တွေကို Autorun.inf တွေကို Disable ပေးနိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်အသုံးတည့်လှပါတယ်။USB Drive ထဲမှာ autorun.inf ဖိုင်ကို Create, Read, Modifies, Delete လုပ်လို့မရအောင် ကာကွယ်ပေးပါတယ်။
ဒီဆော့ဝဲလ်ကို Install လုပ်စဉ်မှာ Automatically Vaccinate ကိုရွေးပေးခဲ့မယ်ဆိုရင် USB Drive ကို တပ်လိုက်တိုင်း Vaccination လုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလို Vaccination လုပ်ထားတဲ့ USB Drive ကိုautorun တွေ အလုပ် လုံးဝ မလုပ်နိုင်တော့ပါဘူး။ အကျယ်တော့ ကိုယ်တိုင်သာလေ့လာပေးတော့။
Posted by တောင်တမန်နယ်စား at 10:14 AM